To teny marina, toa tena miarina… | NewsMada
To teny marina, toa tena miarina…
To teny amin’ny vahoaka ve ny mpitondra ankehitriny? Mahatanteraka izay ampanantenainy sady eken’ny rehetra izay lazaina fa marina, mety, tsara, mahasoa, ho tanteraka… Kibo mitsara tena ny tsirairay, ary eo ny vahoaka mitsara.
Mby aiza, ohatra, ny hoe fanjakana tan-dalàna, tsara tantana, ady amin’ny kolikoly… ? Izay miseho sy atao rehetra, mahabe adihevitra na saika tsy ifampitokisana. Noho ny kitsapatsapa lava, na tsy fifampierana, na tsy fangaraharana… ?
Fahoany fahoany ny raharaha, tian-kano tsy tian-kano. Na ny mpiara-miombon’antoka aza, tsy mitsaha-mitaky ny ezaka misimisy kokoa amin’ireo fepetra takiny: fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly…
Manginy fotsiny ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fahamarinan-toerana sy tsy fitoniana politika… Inona no sakana amin’ny fitondrana? Hafahafa, ny tsy fisian’ny mpanohitra eny amin’ny Antenimiera roa tonta indray no mampikorontana.
Mby aiza koa ny fanafoanana ny fisian’ny tsimatimanota, fa maty tsy manota ny vahoaka? Na ny amin’ny raharaham-pirenena tsy ananan-kavana, ny vahaolana maharitra fa tsy famonoana afo lava, tsy anaovana kiantranoantrano, tsy hetsika ivelany…
To teny marina amin’izany rehetra izany ny mpitondra? Toa teny marina izay lazaina: fampanantenana, fampandriana adrisa? Na karazana fampielezan-kevitra aza… Toa tena miarina ny firenena amin’ny vahoaka mangina, tsy mihetsika…
Misy mahita fa efa miomana sy manomana ny fiatrehana ny fifidianana, taona 2018, ny sasany? Toa tena marina tokoa izany, raha ny afitsoky ny antoko politika etsy sy eroa. Zava-dehibe mahamaika ny fahazoana sy fitanana fahefana.
Sao mba izany koa izao mahatonga ny vahoaka tsy mihetsika izao, tsy miteny, manara-maso… Efa mahatsinjo mialoha izay fiatrehana ny fifidianana any aoriana izay? Fa ny adin-tsy ahi-mahatratra… Toa tsy hita izay tena marina na miarina?